Logos for baararka: fikradaha iyo tusaalooyinka ugu fiican si aad adigu u naqshadeyso | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nerea Morcillo | 02/05/2022 16:09 | Design Graphic, General
Xigasho: Jikada iyo Khamriga
Dhammaan makhaayadaha waxay leeyihiin calaamad muujinaysa iyaga, taas oo ka dhigaysa mid gaar ah, astaantani waxay ka kooban tahay calaamado taxane ah oo aad muhiim u ah haddii aan ka hadalno sawirka.
Sababtan awgeed, sidoo kale waa muhiim inaad tixgeliso qaar ka mid ah sifooyinka aasaasiga ah eee waa in lagu xisaabtamaa marka loo samaynayo astaanta baarkaaga, kafateeriyadaada ama makhaayad kasta. Si kastaba ha ahaatee, qoraalkan, waxaanu ku sharixi doonaa sida loo sameeyo tillaabooyin iyo talooyin fudud.
Laakiin talooyinkani kaliya kama caawin doonaan inaan samayno calaamad gaar ah qaybta makhaayadda, laakiin waxay noqon doontaa dhammaan nooca qaybta aad rabto, ama macmiilku ku weydiiyo.
1 Astaamaha iyo shaqooyinka astaanta: dib u soo celinta
1.1 Qaybaha xidha
1.2 qaybaha kala sooca
1.2.1 Midabada shirkadaha
1.2.2 qoraalka shirkadaha
1.2.3 nooca astaanta
1.2.4 Qorshaynta warbaahinta
1.2.5 Gelida Summada
1.2.6 Buug-gacmeedka Aqoonsiga
2 Tusaalooyinka calaamadaha bar
2.2 guriga dublin
2.3 Bar hal mayl ah
Astaamaha iyo shaqooyinka astaanta: dib u soo celinta
Marka aynu nidhaahno waxa aynu samaynaynaa calaamad gaar ah, waxa lagama maarmaan ah in aynu niyadda ku hayno dhawr arrimood ama qodobbo falanqaynaya oo ujeeddadoodu tahay shaqadeenna. Sababtaas awgeed, qaybtan waxaan u qaybinay dhowr qaybood, taas oo kaa caawin doonta inaad si fiican u fahamto. sida loo bilaabo habka naqshadaynta astaantaada.
Xaaladdan oo kale, waxaan u qaybinay qaybta laba qaybood: dhinac waanu haysanaa ama helnaa kuwaas curiyayaasha mideeya iyo dhanka kale kuwa kala sooca si ay dadka kale uga soocaan. Labada qaybood midkoodna waa mid xiiso leh in la tixgeliyo, maadaama ay ka kooban tahay arrimo, waqti ka dib, ka dhigaya astaanta baarkaaga mid si buuxda u shaqeyneysa.
Fududeynta waa mid ka mid ah furayaasha maskaxda lagu hayo mar kasta oo aad bilowdo naqshadeynta. Summadaada ama summadaadu waa inay noqotaa mid sharraxaysa intii suurtogal ah. Marar badan waxaynu u janjeernaa in aynu ku xad-gudbinno nashqada waxyaalo aan macno lahayn, siddan oo kale waxa aynu ka helaynaa oo kaliya in dadweynaha na arka ay garan waayaan waxa aan ula jeedno nashqadaas. Sababtan awgeed, fududaynta waa in had iyo jeer maskaxda lagu hayaa, oo sidoo kale loo yaqaan saamaynta minimalism: wax badan oo yar.
Hubaal inaad hore u maqashay in calaamaduhu ay tahay inay noqdaan kuwo jiif ah naqshadahooda. Xaqiiqdu waxay tahay in aanay ahayn arrin wax go'aamisa, laakiin waxay ka dhigaysaa mid soo jiidasho leh. Way fiicantahay in astaantu u janjeerto inay jiifto booskeeda awgeed. In kasta oo aad iyo aad u badan oo naqshadeeyayaasha ah ay ku sharxayaan boos toosan oo calaamadahooda ah. Xaaladdan oo kale, maadaama ay calaamad u tahay qaybta bar ama makhaayadda, meel bannaan ayaa ka fiicnaan lahayd.
Waa qodob kale oo ay tahay in lagu xisaabtamo, hal-abuur iyo asal noqda. Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan naqshadeynta ayaa ah mar kasta oo aan naqshadeyno, waxaan ka tagnaa calaamad shakhsi ahaaneed waxa aan sameyneyno.Haddii kale, shaqada aanu qorshaynaynaa waxa laga yaabaa inaanay noqon mid shakhsi ah sida loo baahan yahay. Isku day in aad noqoto qof hal-abuur leh, oo wax kasta ka horraysa ha ku degin waxa ugu horreeya ee ay maskaxdaadu awood u leedahay in ay qabato, ka gudub wixii aad barnaamij samaysay oo ha xaddidin naftaada.
qaybaha kala sooca
Midabada shirkadu waa walxaha lagama maarmaanka u ah haa ama waa inay ku jiraan astaantaada. Badanaa waa laba ama saddex midab, oo ku filan sumaddaada si ay u soo baxdo oo sidaas awgeed uga soocdo inta kale. Waxyaabaha caadiga ah ee qaybta gastronomic ama qaybta martigelinta waxay noqon doontaa in la isticmaalo midabyo dhalaalaya oo muuqda. Ku xisaabtan dhowr arrimood oo aad rabto inaad ka sheegto ganacsigaaga: waa maxay dadweynaha loo jiheynayo, nooca bar ee uu noqon doono, tusaale ahaan, wax habeen, maalin, labadaba, iwm. Ama sidoo kale, nooca cuntada ama cabitaanka ayaa la bixin doonaa. Waxaa laga yaabaa inaysan la xiriirin midabada, laakiin marka aad gasho mashruuca, waxaad fahmi doontaa in wax walba ay la xiriiraan.
Haddii aan ku sii wadno liiska walxaha shirkadaha, kama tagi karno nafteena daabacaadda. Farsamaynta qoraalka shirkadu waxay noqon doontaa mid matalaysa summadaada oo dhan. Sababtan awgeed, waxaa muhiim ah inaad si fiican u doorato qoraalka daabacaadda maaddaama ay noqon doonto qayb aad u xoog badan oo sawirka naqshadeyntaada ah. Waxyaabaha caadiga ah ee kiisaskan waa in la isticmaalo font cajiib ah oo si fiican ugu daraya midabka. Sidoo kale, Iyada oo ku xidhan sida habka aad wax ula xidhiidhi lahayd u ​​noqon doono, waxa ay noqon kartaa qoraal aad u firfircoon ama, caksigeeda, shay ka sii daran.
Waxyaalaha kale ee lagu xisaabtamayo waa naqshadda aad isticmaalayso, nooca logo ee aad ku bilaabayso, waxa aad horeba u ogaanaysaa inay jiraan noocyo kala duwan: logo, imagotype, isotype, iwm. Dhamaantood, Waxay leeyihiin sifo iyaga ka duwan inta kale. Sidaa darteed, marar badan ayaa loo baahan yahay in la dabaqo cunsur siinaya macluumaad ka wanaagsan iyo marar kale oo loo baahan yahay in la cabudhiyo.
Bal qiyaas in aad mar hore summadaada samaysay, digitized oo si qumman loo dhisay. Hadda waa waqtigii la adeegsan lahaa xayaysiimaha ama marxaladda xayeysiinta sumadda. Suuqgeynta ayaa ku soo biirtay halkan, markaa waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la abuuro dhexdhexaad xayaysiis ah astaantaada. Sida caadiga ah, Waa wax caadi ah in magacyada baar ama makhaayadaha ay isku xayeysiiyaan iyagoo adeegsanaya warbaahinta internetka, taas oo ah, akoon Instagram ama profile ah oo aad ku sharaxdo adeegga aad bixiso, qayb kale oo aqoonsi ah oo aad ka hadlayso astaanta, iwm. Dhexdhexaad kasta oo aad isticmaasho, had iyo jeer u samee sabab.
Waxaan sidoo kale helnaa gelinta calaamadda element sare. Waa muhiim in astaantaada lagu matalo asalka, asalkani wuxuu noqon karaa mid gebi ahaanba dhexdhexaad ah ama, liddi ku ah, sawir. Waxaa xiiso leh in lagu dabaqo asalka sawirada, maadaama habkan aad isku dari karto kuwa xun iyo kuwa togan ee astaantaada, taas oo ah, astaantaada lagu arko madow, ama caddaan ku yaal asalka iftiinka ama mugdiga, habkan waxaad ku ogaan doontaa haddii calaamaddaada ay shaqeyneyso codsiga samee, xasuuso.
Ugu dambayn, laakiin ugu yaraan, waxaan helnaa buug-gacmeedka aqoonsiga muuqaalka ee astaanta. Buug-gacmeedyadan waxaa lagu gartaa ka kooban dhammaan walxaha muhiimka u ah naqshadeynta iyo matalaadda calaamad gaar ah. Halkani waa halka lagu soo bandhigo dhammaan farshaxanada ugu dambeeya ee la xidhiidha naqshadaha astaanta. Waxa jira noocyo badan oo buug-gacmeedyo ah, dhammaantoodna isku hab bay raacaan, marka la eego nuxur ahaan, inkasta oo qaarkood si fiican loo kala soocay. Tusaale ahaan, waxaan ka heli karnaa cabbirro iyo qaabab kala duwan, dhinacyo kale ayaa sidoo kale isbeddelaya, sida qaabka qaabka.
Tusaalooyinka calaamadaha bar
Guinness waa nooca biirka iyo isla mar ahaantaana, bar biir ah oo lagu garto iibinta biirka Irishka. Waqtigan xaadirka ah, nooca noocaan ah waxaa lagu qaybiyaa magaalooyin kala duwan oo dalal kala duwan ah. Waxa lagu gartaa maaha noocyada kala duwan ee biirka ee ay bixiso ee waa calaamadeeda. Astaan ​​u taagan qaab-qoraalkeeda caadiga ah iyo kuwa halista ah. Intaa waxaa dheer, qayb muhiim ah ayaa lagu daraa calaamadda qaabka kataaradda. Shaki la'aan naqshadeynta oo aad u fudud in la aqoonsado oo la kala saaro.
Hadda waxa jira tartamo kale oo la mid ah, sida kiiska Guriga Dublin. Dublin House waa mid kale oo ka mid ah baararka iyo baararka iibiya beerka Irishka iyo Jarmalka. Dhinac wax badan ka faa'iidi kara waa calaamaddeeda, maadaama ay sidoo kale lagu matalo qoraal-qoraal caadi ah oo caadi ah, iyo midabada loo adeegsaday astaanta ayaa aad u muuqda.
Dhab ahaantii waa naqshad si buuxda u shaqaynaysa. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale la iftiimiyay in ganacsiga noocan oo kale ah uu sidoo kale ku baahsan yahay geeso ka mid ah dalal badan, taas oo sahlaysa iibka wanaagsan.
Bar hal mayl ah
Hal mille waa nakhshad bar casri ah. Naqshaddeedu waxay u taagan tahay ka kooban yahay qoraallada sans-serif oo si fiican isugu darsa waxa ay calaamaddu doonayso inay la xidhiidho. Baarka caadiga ah ee wadada dhinaceeda laakiin leh muuqaal aad u casri ah oo casri ah. Shaki la'aan, naqshad aan la dareemin oo si fiican u ciyaaraysa midabada shirkadaha ee lagu dabaqay, qaar ka mid ah midabada mugdiga ah, oo ka soo jeeda shukulaatada brown iyo brown ocher badan. Ma ku dhiiran lahayd inaad isku daydo kaliya muuqaalkeeda?
Naqshado aad u badan ayaa loo isticmaalaa qaybta dib u soo celinta, si aad u badan oo aan awoodin in aan bilowno mashruuc noocan oo kale ah iyada oo aan marka hore ka fekerin waxa ugu horreeya ee ay tahay in aan xisaabta ku darno.
Naqshadeynta astaanta baar ama makhaayad waa hawl adag haddii aadan si fiican u shaqayn tan iyo bilowgii. Haddaba, waxaa muhiim ah inaad xifdiso qaar ka mid ah dhinacyada aan ku tusnay, waayo waxay kaa caawinayaan inaad ogaato sida loo bilaabo.
Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay naqshadeynta summada, gaar ahaan qaybtan oo aad uga badan maalin kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » logos ee baararka